Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Ny valala misy, ny tsy fisian’ny fanazavana mitera-doza | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Ny valala misy, ny tsy fisian’ny fanazavana mitera-doza
Ny fiverimberenan’ny fanjavonan’olona indrindra moa fa zaza sy zatovo dia miteraka tebiteby eo amin’ny fiarahamonina. Ny tsy fisian’ny fanambarana avy amin’ny fitondrana dia manome vahana an’izao karazana tsaho rehetra izao. Ny resaka tena mandeha moa dia ny fangalaran-jaza sy ny tambajotra fangalarana taova. Tsy ny olona tsy fantatra vahiny amin’ny tanàna tazana mihaodihaody irery intsony no mampiahiahy ny mponina fa na eo amin’ny samy mpiray tanàna izao aza dia misy fifanondroana molotra sy fifanendrikendrehana mikasika fandraisana anjara amin’izany tambajotra mpamatsy an’izany tsena maizin’ny taova izany.
Malaza ny fisin’io tsena maizina io ary tany ivelany tany. Efa nisy ny fahatraran’ny mpitandro filaminana toerana fandidaina tsara rafitra ahafahan’ny manam-pahaizana manala ara-penitra an’ireo taova ilainy. Asa ny fisian’izany trano fandidiana izany eto amin’ny nosy. Saro-pady moa ny fikojana taova alaina avy amin’ny olona iray afindra amin’ny olon-kafa. Tsy vitan’ny fandrasarasana an’ilay izy toy ny fanimbihana hena. Ny fitaterana ilay taova koa dia misy fenitra sady voafetra ny fotoana tsy maintsy ahatongavany any amin’ilay toerana fandidiana hametrahana ilay izy amin’ny vatana marary hafa. Any ivelany izany, eto an-toerana moa tsy mbola misy ny fanaovana « grefin’ny taova ».
Io korontana etsy sy eroa io dia fomba firongatry ny tebiteby mikiky ny mponina manerana ny nosy. Any ambanivohitra lavitra any sy aty amin’ny tanan-dehibe dia mahazo vahana ny fanitarana manakorontana ny saim-bahoaka noho ny fahanginan’ny mpitondra. Toy ny momba ny fangalana an-keriny olona atao takalo vola ny ainy ny fanjavonana ankizy sy zatovo nangalarin’ny andian-jiolahy. Miala bal any tompon’andraikitra. Maimay ery izay eo amin’io toerana io rehefa hanao fandokafana fa mitampi-bava anefa rehefa ilaina ny fanazavana avy any aminy mikasika ny marina amin’ny zava-misy, matetika anefa moa ny zava misy dia mitory raharaha tsy voafehy. Izany angamba no mitarika ny tomponandraikitra sasany hihoa-pefy sy hitsabaka any amin’ny tsy adidiny. Rehefa mifangaro toy izany moa ny fanaovana adidy sy ny fampiharana fahefana dia misambaodika ny raharaha.